News Collection: मैले के गर्दा उपयुक्त होला ?
मैले के गर्दा उपयुक्त होला ?
म एक विवाहित महिलालाई मन पराउँछु, उनी एक सन्तानकी आमा हुन्, तर घरमा मेरा अभिभावकहरू यसका लागि तयार छैनन्। मेरा अभिभावकहरू मलाई धेरै पढाउन चाहन्छन् र, यति चाँडै विवाह नगर्न सल्लाह दिन्छन्। म भने ती महिलाबिना बाँच्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकें। जहाँ गए पनि उनकै याद आउँछ। म उनीसँगै विवाह गर्न चाहन्छु। मैले के गर्दा उपयुक्त होला ?
सबैभन्दा पहिले तपाईंले आफ्नो अध्ययन पूरा गर्नुपर्छ र रोजगारीमा लाग्नुपर्छ। तपाईंका अभिभावकहरूको इच्छा र चाहना पनि त्यही हो। कुनै पनि अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई सफलताको गोरेटोमा हिँडेको हेर्न चाहन्छन्। अध्ययनको अवस्थाले तपाईंको उमेर धेरै भए जस्तो लाग्दैन त्यसैले उमेर छँदै आफ्नो ध्यान अध्ययन तर्फ लगाउनु तपाईंको हितमा हुन्छ। जहाँसम्म ती महिलाबिना बाँच्न नसक्ने कुरा छ त्यो तन्नेरी मनको क्षणिक आवेग मात्र हुनसक्छ। म तपाईंलाई ती महिलासँग विवाह नगर्न सल्लाह दिन्न, विवाह गर्नुस् तर त्यसका लागि आफ्नो खुट्टामा उभिनुहोस्। याद राख्नुहोस् आफ्नो खुट्टामा उभिनका लागि पर्याप्त योग्यता हासिल गर्नुपर्छ। बिना अध्ययन कुनै पनि योग्यता हासिल गर्न सकिन्न् भन्ने हेक्का तपाईंलाई हुनै पर्छ। त्यसका साथै ती महिलाले पनि तपाईंलाई मन पराउनुपर्‍यो ! यसमा मन पराएर मात्र हुँदैन, विवाहित महिलासँग विवाह गर्दा आइपर्ने कानुनी झन्झट र अन्य सामाजिक कुराहरूको पनि प्रश्न उठ्छ। ती प्रश्न र समस्या समाधान नगरी तपाईं उनीसँग विवाह गर्ने कुरामा अघि बढ्न सक्नुहुन्न।